[Zawgyi] တက္ကစီကားပိုင်ရှင် ပြောပြလာတဲ့ YBS (၄၀) ယာဉ်တိုက်မှုမှာ ဆုံးပါးသွားတဲ့ ယာဉ်မောင်းလေးရဲ့ ဘဝ . . . ကျနော်တို့ ကံကောင်းပါရစေ…ကျနော်စာမရေးဖြစ်တာကြာပြီ။Covid 19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် ကမ္ဘာနှင့်အ၀ှမ်းစိတ်မချမ်းမြေ့ဘွယ်ရာဖြစ်နေကြချိန် စာရေးချင်စိတ်မရှိဖြစ်နေတာ။ကျနော့စာဖတ်ပီးရင်လည်း အသိမိတ်ဆွေတွေက၀မ်းနည်းကြေကွဲရကြောင်း ပြန်ကြားရတော့ရေးချင်ပေမဲ့မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ရေးရပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးရက်က ရန်ကုန်မြို့ ဆင်မလိုက်အနီး ဘူရင့်နောင်လမ်းမကြီးပေါမှာ YBS 40 Bus နဲ့ တိုက်မိပြီး လူ ၃ ဥိးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ Taxi FF-2574 ပိုင်ရှင်ဟာ ကျနော်ဖြစ်နေခဲ့လို့ပါဘဲ။ကျနော် ယူကြုံးမရ နှမြောဝမ်းနည်း စွာဖြင့်ဘဲ ဒီစာကိုရေးရပါတော့မယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ မနက် ၇ နာရီကျော်လောက်မှာ …
မြန်မာပီသမှု ( ကောင်းလွန်းလို့ မျှဝေပေးတာပါ)
[Zawgyi] မြန်မာပီသမှု ( ကောင်းလွန်းလို့ မျှဝေပေးတာပါ) မိခင်ကြီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်သည် မိမိ၏ သားသမီးများကို မြန်မာ့လူမှုရေးနှင့် ကိုယ်ကျင့်သီလ၏ တန်ဖိုးကို အလေးထားပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကို ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းရန် သွန်သင်ဆုံးမခဲ့ပါသည်။တာဝါလိန်းလမ်းအိမ်တွင် နေထိုင်စဉ်အတွင်း ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် ညတိုင်း အပေါ်ထပ်ရှိ ဘုရားခန်းသို့သွားရောက်စေပြီး ဘုရားရှိခိုးကြရစေပါတယ်။ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွင်လည်း ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် အဝတ်အစားများကို (ကျောင်းဝတ်စုံ) ကို အိမ်တွင် ကိုယ်တိုင်ချူ ပ်ပေးပြီး ဝတ်ဆင်စေခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် `စု` ကျောင်းတက်စဉ် ဝတ်ရသော စကတ်သည် တခြားသူများထက် ပိုရှည်လျှားပါသည်။ သွားလာ နေထိုင်မှုတွင်လည်း ခါးကိုမတ်မတ်ထားကာ လျှောက်လှမ်းရန် ထိုင်ရန်တို့ကို ပုံစံကျနစေရန် စနစ်တကျ သွန်သင်ပြီး ပြုမူစေခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် `စု` ရဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို …
ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ပြီ
[Zawgyi] ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ပြီ မြန်မာနိုင်ငံသည် ယခင်ကကဲ့သို့ ဝင်ငွေအနိမ့်ဆုံးအဆင့်မဟုတ်တော့ဘဲ အလယ်အလတ်အဆင့်ဝင်ငွေနည်းနိုင်ငံများ စာရင်းထဲသို့ (Low-Middle income Countries) ပါဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်က နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကို ဝင်ငွေမြင့်မားမှု၊ အလယ်အလတ်ဝင်ငွေနှင့် အလယ်အလတ်အဆင့် ဝင်ငွေနည်းနိုင်ငံ၊ဝင်ငွေနည်းနိုင်ငံ စသည်ဖြင့် အဆင့်များသတ်မှတ်ခွဲခြားထားကာ ယခင်က မြန်မာကို ဝင်ငွေအနိမ့်ဆုံးအဆင့်စာရင်းထဲသို့ ထည့်သွင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအနေဖြင့် ယခုအချိန်တွင် ယင်းစာရင်းမှ ရုန်းထွက်သွားနိုင်ပြီး အလယ်အလတ်အဆင့်ဝင်ငွေနည်းနိုင်ငံများ စာရင်းထဲသို့ တက်လှမ်းသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့် သွားခြင်းနှင့်အတူ ယခင်ကရရှိခဲ့တဲ့ ချေးငွေအတိုးနှုန်းလျှော့ပေးတဲ့ အခွင့်အရေးအပါအဝင် အခွင့်အရေးအချို့ကို ဆုံးရှုံးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်မာကို ယခင်က ချေးငွေချေးပေးရာတွင် အတိုးနှုန်းအား ဝ.၇၅ဖြင့် ချေးပေးသော်လည်း ယခုမူ …
[Zawgyi] မိုးရွာပြီးတဲ့အချိန် ဗွက်အိုင်ထဲမှာ ဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးငယ်ကို မိခင်ဖြစ်သူက ရိုက်ဖို့ တုတ်ကိုင်ပြီး သွားလိုက်သောအခါ . . . မိုးရွာပြီးတဲ့အချိန် ဗွက်အိုင်ထဲမှာ သူကစားနေတာပေါ့။ဗွက်အိုင်ထဲမှာ ဆင်ကြီးလို လေးဖက်ထောက်ကြီး တွားသွားလိုက်၊ဗွက်တွေကို ဖင်ခုထိုင်လိုက်နဲ့။ ပုစွန်လုံးပေါက်လေးတွေကို ဖမ်းလိုက်၊ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်။သူ့ဘာသာသူ သဘောတွေကျပြီး တခစ်ခစ်ရယ် နေတတ်သေးတာ။သူဘာလို့ အဲဒီလောက်ပျော်နေပါလိမ့် ဆိုတာကျွန်တော်မသိ။သူကတော့ ‌ဘယ်သူ့မှဂရုစိုက်ဘဲ ပျော်နေတာပဲ။မကြာပါဘူး။ သူ့အမေက တုတ်ကြီးကိုင်ပြီးလာတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့အနားမရောက်ခင်ကတည်းက သူ့ကိုကြိမ်းလာတာ။သူ့မျက်နှာမှာ ခုနကပျော်နေတာတွေ ဘယ်ပျောက်သွားမှန်းမသိ။မျက်နှာက ညှိုးလာတယ်။မျက်လုံးကလေးတွေကိုကြည့်တော့ ကြောက်နေမှန်း သိသာတယ်။ “နင်လာစမ်း၊အဲဒီဗွက်တွေထဲမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ။”သူ့အမေကခေါ်နေပေမဲ့ သူက ချက်ချင်းမသွားဘူး။ထိုင်လျက်ပဲ။သူ့အမေ ပိုပြီးဒေါပွလာပြီ။ “ဟဲ့၊ငါပြောနေတာမကြားဘူးလား။” ပြောလည်းပြော သူ့အနားလည်းရောက်သွားပြီး ရိုက်မယ်လို့တုတ်ကိုလှမ်းအမြှောက်မှာ ကျွန်တော်က “အစ်မ”လို့ ခေါ်လိုက်တယ်။သူ့အမေက သူ့ကို …
သေချာတဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ဟန်ဒါဆင်ကို ထိန်းရတော့မယ့် ယူနိုက်တက်
[Zawgyi] သေချာတဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ဟန်ဒါဆင်ကို ထိန်းရတော့မယ့် ယူနိုက်တက် ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်မှာအငှားနဲ့ သွားရောက်ကစားနေတဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ရဲ့ ဂိုးသမားလေး ဟန်ဒါဆန်ရဲ့ ဒီရာသီလက်စွမ်းတွေက တော်တော်လေးကိုကောင်းမွနေတာဖြစ်ပြီးတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဂိုးသမားအဖြစ်တောင်သက်မှတ်ခံထားရတဲ့ ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်ဒါဆန်ရဲ့ လက်စွမ်းတွေကြောင့် လာမယ့်ဘောလုံးရာသီမှာ ယူနိုက်တက်ရဲ့နံပါတ်တစ်ဂိုးသမားနေရာကိုတောင် ဒီဂီယာကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ ရယူလာဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ ထင်ကြေးပေးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီဂီယာကိုကျော်ပြီးယူနိုက်တက်ရဲ့နံပါတ်(၁)ဂိုးသမားဖြစ်လာဖို့ကတော့ ဟန်ဒါဆန်အတွက်တစ်ရာသီလက်စွမ်းပြရုံနဲ့ မလုံလောက်သေးဘူးလို့ယူနိုက်တက်ဘက်က ယူဆထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဟန်ဒါဆန်ကိုလာမယ့်ရာသီမှာလည်း အသင်းကိုပြန်မခေါ်ပဲ ဆက်လတ်ပြီးတော့အငှားချထားဖို့ယူနို်က်တက်ဘက်က ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်တို့ဟာ ဟန်ဒါဆန်ကို အပြီးသတ်ရောင်းချပစ်ချင်တဲ့ အနေအထားမျိုးမှာလည်းရှိမနေပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စပါးအသင်းကတော့ ဟန်ဒါဆန်ကိုပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်(၂၂)သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့မျက်စိကျနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဟန်ဒါဆန်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ လက်ရှိအနေအထားနဲ့ အငှားကစားသမားဘ၀မှာရှိနေတာမျိုးကိုလိုချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ယူနိုက်တက်တို့အနေနဲ့ ဟန်ဒါဆန်ကိုအသင်းမှာဆက်ထိန်းထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဟန်ဒါဆန်အတွက် …
ဇီးကုန်းမြို့တွင် မိုးကြိုးပစ် ခံရမှုကြောင့် ၁၀ တန်းကျောင်းသား ၁ ဦးသေဆုံး
[Zawgyi] ဇီးကုန်းမြို့တွင် မိုးကြိုးပစ် ခံရမှုကြောင့် ၁၀ တန်းကျောင်းသား ၁ ဦးသေဆုံး ပဲခူးတိုင်း ဇီးကုန်းမြို့မှာ ဇွန် ၆ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီခွဲကျော်လောက်က မိုးကြိုးပစ်ခံရလို့ ၁၀ တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုထားတဲ့ လူငယ်တယောက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဇီးကုန်းမြို့နယ် ကံကလေးကျေးရွာနေမှာနေထိုင်တဲ့ ၁၀ တန်းကျောင်းသား ကိုနိုင်လင်းထက်ဟာ လယ်ကွင်းထဲအသွားမှာ မိုးကြိုးထိမှန်ပြီး သေဆုံးသွားတာပါ။ဇီးကုန်းမြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးကျော်ကျော်က “သူတို့က ညီအစ်ကို ၂ ယောက်။ အဖေနဲ့အတူ လယ်ထဲကို မြတ်သတ်ဆေးဖျန်းဖို့ စက်ဘီးတွေနဲ့ ရေပုံးတွေသွားထားကြတာ။ အပြန်မှာ အဖေကရှေ့က စက်ဘီးနဲ့ သွားနှင့်ပြီ။ နောက်မှာ ညီအစ်ကို ၂ ယောက်က မလှမ်းမကမ်းက ပြန်လာကြတာ မိုးကလည်းရွာနေတာ အစ်ကိုက …
အပူကန်တတ်တဲ့ရာသီမှာ မိတ်၊ အပူဖု၊ ဝက်ခြံ ထွက်လာရင် ပျောက်စေတဲ့ ဆေးနည်း
[Zawgyi] အပူကန်တတ်တဲ့ရာသီမှာ မိတ်၊ အပူဖု၊ ဝက်ခြံ ထွက်လာရင် ပျောက်စေတဲ့ ဆေးနည်း မိတ်ထွက်တာက နွေရာသီမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ လူကြီးလူငယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကလေးတွေမှာ ပိုတွေ့ရတယ်။ ခပ်သေးသေး၊ခပ်နီနီအဖုလေးတွေ နဖူး၊ကျော၊လည်ပင်းနဲ့ ရင်ဘတ်တွေမှာ ပေါက်ရင် မိတ်ယားနာလို့ ပြောတတ်ကြတယ်။တကယ်လည်း မိတ်ဖုတွေ ပေါက်ရင်ယားလာတယ်။ ပြီးရင် နာတာမဟုတ်ဘဲ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ခံစားရတယ်။ အထူးသဖြင့် အဖုလေးတွေကို ပွတ်တိုက်မိရာက ဖြစ်တယ်။အပူချိန်များလေ ချွေးထွက်များလေ မိတ်ယားနာက ပိုဆိုးလေပဲ။ ကုတ်ပါများရင် ပိုးဝင်တာ ထပ်ဆင့်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။မိတ်ထွက်တာကို အင်္ဂလိပ်လို prickly heat လို့ခေါ်ပါတယ်။ “heat rash” ၊”summer rash”၊ “Sweat rash”စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး သုံးတယ်။ ဆေးစာလိုကျ miliaria …
[Zawgyi] ဘုရားဘုရား ဓာတ်ခွဲခန်း အဖြေကို အမှန်ထင်ပြီးသာ ခွဲစိတ်လိုက်လို့ကတော့ မတွေးရဲစရာပါ ၄.၆.၂၀၂၀ နေ့ခင်း ၁၂ နာရီက ကျွန်တော့အဖွား သွေးသွားစစ်ပါတယ်။ အသက်က ၇၈ နှစ်ရှိပါပြီ။Result ကတော်တော်လေးကို အခြေအနေကဆိုးပါတယ်။ ဆရာဝန်သွားပြတော့ဆရာဝန်ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ နောက်ဓါတ်ခွဲခန်းတစ်ခုမှာပြန်စစ်ခိုင်းပါတယ်။နောက်စစ်တဲ့ဓါတ်ခွဲခန်းက ၅ ရက်နေ့ ညနေ၆နာရီမှအဖြေရတာပါ။ အဲ့တော့အဖြေကနောက်တစ်မျိုး ဖြစ်နေတယ်(အမြဲပြ​နေကျဆရာဝန်မို့သာ မှားယွင်း​နေနိုင်တယ်လို့ သူသုံးသပ်နိုင်တာပါ ပြ​​နေကျမဟုတ်တဲ့ဆရာဝန်ကသာမှားယွင်း​နေတဲ့resultအတိုင်း ​ဆေးကုလိုက်မယ် ​ဆေးညွှန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်​ရော)ဒီနေ့ပြန်သွားတော့ နီနီက သူတို့စစ်ထားတဲ့အဖြေမှားသွားလို့ပါဆိုပြီးပြောတယ်။ ပြီးတော့ နီနီက ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကCareless error ဖြစ်သွားလို့ပါဆိုပြီး ဖြေရှင်းတယ် ဓါတ်ခွဲခန်းတစ်ခုက အဲ့​လောက်တောင် နမော်နမဲ့ နိုင်လို့ရလား။ လူ့အသက်တစ်​ချောင်းပါ errorရှိရ​အောင် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးအသက်အရွယ်ရ​နေတဲ့လူကြီးဆိုတာဆရာဝန်က resultအမှားကို ကြည့်ပြီး ခွဲစိတ်ရနိုင်တယ်လို့ ​ပြောလိုက်ကတည်းက စိတ်ထိခိုက်​သွားတာ။(အိမ်လာ​တောင်းပန်ပါတယ် …
မှားနေတယ်။ မှားနေတယ်။ မှားနေတယ် လို့ပဲ ပြောလိုက်ပါရစေဗျာ။
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် မှားနေတယ်။ မှားနေတယ်။ မှားနေတယ် လို့ပဲ ပြောလိုက်ပါရစေဗျာ။ မသိလို့မေးပါရစေ တကယ်ကိုနားမလည်တာဘာ အခေါက်အခေါက်အခါခါလည်းစဉ်းစားနေတာ ဘလိုမှ နားမလည်ဘူး။စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ စားပွဲတွေ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု မကာဘဲစားပွဲတစ်ခုတည်းကို ၂ဖက်ကာထားတာ ဘယ်လိုမှ သဘောမပေါက်ဘူး။မိသားစု ၅ ယောက် ကားအတူစီးပြီး ဆိုင်သွားတယ် ဆိုင်ရောက်တော့မှ အတူစီးလာတဲ့ ၅ယောက်က ကာပီးထိုင်စားရတယ်။ ဆိုင်ကယ် ဖင်ပူးမတတ် ထိုင်ခဲ့တဲ့ အတွဲက ဆိုင်ရောက်မှ ကာပီးထိုင်စားတယ်။ဆိုင်ကယ်နဲ့ ရှေ့တျောက်ပေါ် မေးတင်ထိုင် ပုခုံးဖက်လာတဲ့ သယ်ချင်း၂ယောက်က ဆိုင်ရောက်မှ ကာပီးထိုင်၊၃ယောက်စီးလာတဲ့ လူတွေက ဆိုင်ရောင်မှ တစ်ခုံထဲ ကာပီးထိုင် ဘာထူးခြားသွားလည်း ဘာအတွက် ဒီလိုကာထားတာလည်းဖြစ်သင့်တာက စားပွဲ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို ကာထားရမှာမဟုတ်လား??? တစ်ဖွဲ့တည်းအတူလာတဲ့သူတွေကျတော့ ခုံပေါ်မှာ …
သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများ မြင်ကြပါစေ … သိမ်ဇရပ်မှာ Q ဝင်နေတဲ့ ညီမတစ်ယောက် ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ
[Zawgyi] သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများ မြင်ကြပါစေ … သိမ်ဇရပ်မှာ Q ဝင်နေတဲ့ ညီမတစ်ယောက် ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ အခု သိမ်ဇရပ်ရောက်နေပါပြီ။ ၁။လူကြီးတွေပြောသွားတာ က နင်တို့ စီးပွားသွားရှာနေတာကို ငါတို့ကလိုက်လုပ်ပေးရတာ… ငါတို့ နင်တို့ကို မော်လမြိုင်မှာ သွားကြိုတာ အလှူရှင်တွေကပေးလို့ လာကြိုရတာပါတဲ့… ငါတို့ကတစ်ပြားမှ မရပဲလိုက်လုပ်ပေးရတာပါတဲ့ ၂။နင်တို့ ကို ဘယ်ကမှ လက်မခံဘူး အဆိုးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ က အစ လက်မခံပါဘူးတဲ့ ၃။ဒီအခု လုပ်ပေးတာတွေက နိုင်ငံတော် ကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ။နိုင်ငံတော်က ဘက်ဂျက်တစ်ပြားမှ ထုပ်ပေးထားတာ မရှိပါဘူးတဲ့။ ၄။ဒါတွေကို မြို့လူကြီး ကိုယ်တိုင် က ဒီထက် ရင့်သီးတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ပြောသွားပါတယ်။စာရှည်မှာ …
This Year : 253155
Total Users : 548288
Total views : 2443131